हर्मोन गडबडीले कस्ता रोगहरू निम्त्याउछन् ? थाहा पाउनुस् « News24 : Premium News Channel
१९ आश्विन २०७४, बिहीबार
हर्मोन गडबडीले कस्ता रोगहरू निम्त्याउछन् ? थाहा पाउनुस्
एजेन्सी । प्रत्येक इन्डोक्राइन ग्रन्थीहरुबाट निस्कने विशेष प्रकारको झोल रसायन लाई हर्मोन भनिन्छ । हर्मोनले शरीरका कोषहरु र अन्य ग्रन्थीहरुको कामलाई उत्तेजित पार्छ । यसैले हर्मोनलाई रासायनिक संवाददाता पनि भनिन्छ । हर्मोनले हाम्रो जीवनमा धेरै प्रकारका रोगहरु लाग्ने पनि गर्छन। जसलाई यसरि हेर्न सकिन्छ ।
थाइराइड : थाइराइड हार्मोनले शरीरको मेटावोलिजमलाई नियन्त्रणमा राख्ने काम गर्दछ । थाइराइड हार्मोन बढी उत्पादन हुने अवस्थालाई हाइपरथाइराइड भनिन्छ भने कम उत्पादन भयो भने हाइपोथाइराइड हुन्छ । हाइपर थाइराइडमा व्यक्ति दुब्लाउदै जाने, गर्मी धेरै हुने, पसिना धेरै आउने, मुटु धेरै धकधक हुने, दिसा धेरैपटक लाग्ने, हातखुट्टा काम्ने, सास फुल्ने, निद्रा नलाग्ने, गलगाँड निस्कने, आँखा ठुलो हुँदै जाने, महिनावारी गडबड हुने, निसन्तान हुन जस्ता लक्षण देखा पर्छन् ।
मधुमेह : इन्सुलिन भन्ने हार्मोन गडबडीका कारण मधुमेह लाग्छ । मानिसको पेटमा रहेको प्याङ्क्रियाजले इन्सुलिन हर्मोनको उत्पादन गर्छ । यसको मुख्य काम भनेको रगतमा रहेको चिनीको मात्रालाई सन्तुलनमा राख्ने हो । यदि इन्सुलिनको उत्पादनमा कमी आयो भने वा राम्रोसँग काम गर्न सकेन भने मधुमेह रोग लाग्छ ।
महिनावारीमा गडबडी र निःसन्तान : महिनावारी गराउने हार्मोनलाई सेक्स हार्मोन भनिन्छ । यो हार्मोन २ किसिमका हुन्छन् । एउटा दिमागको तल रहेको पिट्युरी ग्रन्थीबाट निस्कने हार्मोन एलएच, एफएसएच र प्रोल्याक्टिन भन्ने हार्मोन हुन्छ भने दोस्रो डिम्बबाट निस्कने हार्मोन एस्ट्रोजन र प्रोजेस्टेरोन भन्ने हुन्छ । यी दुवैको कम्बिनेसनबाट महिनावारी हुनेगर्छ । यीमध्ये कुनै पनि हार्मोनमा गडबडी भएमा महिनावारीमा समस्या उत्पन्न हुन्छ ।१६ वर्षभित्र हुनुपर्ने महिनावारी कसै–कसैलाई २० वर्षसम्म पनि नहुने भएमा यसै हार्मोनको कारण हो । सेक्स हार्मोनको उत्पादन राम्रोसँग हुन नसकेमा महिनावारीमा गडबडीका साथै निसन्तानको समस्या धेरै हुनसक्छ ।
मोटोपन : थाइराइडका कारण मानिसको मोटोपन बढ्छ भने एड्रिनल ग्रन्थीले कटिजोल हार्मोन बढाउँदा पनि मोटोपन बढ्छ । कटिजोल हार्मोन बढी भएमा कुशिङ सिन्ड्रोम भन्ने रोग लाग्छ ।
महिलाको शरीरमा धेरै रौं उम्रने : हार्मोनकै कारण महिलामा चाहिनेभन्दा धेरै रौं निस्कने र पुरूषमा जस्तै दाह्रीजुँगा आउने, छाति तथा यौनाङ्गलगायत शरीरका धेरै स्थानमा रौं आउने हुन्छ । टेस्टोस्टेरोन हार्मोनको उत्पादन धेरै भयो भने महिलामा यस्तो समस्या देखिन्छ । पोलिसिस्टिक सिन्ड्रोममा कारण पनि यस्तो हुनसक्छ । डिम्बाशयमा कुनै ट्युमरका कारण पनि कहिलेकाहीँ महिलाको शरीरमा धेरै रौं उम्रने हुनसक्छ ।
पुड्को वा धेरै अग्लो : पिटुट्युरी ग्रन्थीलाई मास्टर ग्रन्थी पनि भनिन्छ । यसले शरीरलाई आवश्यक पर्ने धेरै हार्मोन उत्पादन गर्छ । पिट्ट्युरी ग्रन्थीमा कुनै कारण रोग लाग्यो भने ग्रोथ हार्मोनको कमी हुन्छ । जसबाट उचाई बढ्दैन । ग्रोथ हार्मोनको कमी भयो भने यसको इन्जेक्सन लगाएमा हार्मोनको उत्पादन हुन्छ ।
भारतीय दूतावासका सुरक्षाकर्मीले आफैँलाई गोली हानेर आत्महत्या गरे
काठमाडौं । काठमाडौं लैनचोरस्थित भारतीय दूतावासमा कार्यरत एक सुरक्षाकर्मीले आफैँलाई गोली हानेर आत्महत्या गरेका छन्